समाज निर्माणमा संगीत–साहित्यको भूमिका के हुन्छ ? संगीत र फिल्मले कसरी दिशानिर्देश गर्छन् ? हत्या–हिंसा, बलात्कार जस्ता अपराध बढ्नु वा बौद्धिक पलायनमा रुचि बढ्नुमा कलाको कस्तो प्रभाव हुन्छ ? आइतबार यी प्रश्नको जवाफमा संगीतज्ञ गोपाल योञ्जन जोडिएर आए ।
विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको फ्रेन्साइज गायन प्रतियोगिता ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को शनिबार साझ ९ बजे कान्तिपुर एचडी टेलिभिजन र डिस होम रमाइलो एचडीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको हो।
चुपचाप प्रहरीको जागिर खाइरहेका छत्र गुरुङलाई विसं २०२९ तिर गोपाल योञ्जनले गीत गाउन भनेछन् । गुरुङ फुर्किंदै योञ्जनछेउ पुगेको अहिले सम्झन्छन् ।
नाममा त्यस्तो के छ ?
विलियम शेक्सपियरले भनेजस्तो ‘नाममा के नै छ र ? गुलाबलाई हामी अरू जे नै नामले पुकारे पनि आखिर त्यसले दिने मीठो बासना नै हो’ भन्ने कुरामा अहिलेको समाज विश्वस्त हुन सक्ला ?
जस्तो क्षण उस्तै नाचगान
मेलापात जाँदा होस् या कुनै पर्व मनाउँदा, जन्मँदा होस् या मृत्यु हुँदा, तामाङ समुदायमा समयअनुसारका गीत र नाच छन् । समयअनुसार गीत गाउँदै नाच्ने र गीतको बोलअनुसार अभिनय गर्ने परम्परा अझै पनि छ ।